မနက်ခင်းတိုင်းမှာ သံလွင်ဆီတစ်ဇွန်းစားပေးမယ်ဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ?
in Health and beauty, Lotaya, Uncategorized
ကျွန်မတို့အများစုက သံလွင်ဆီကို ချက်ပြုတ်ဖို့နှင့် တို့စရာအရည်လောက်အဖြစ်သာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သင်သာ ကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင် သံလွင်ဆီမှာ အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ လူတွေက သံလွင်ဆီဟာ နှလုံးအတွက် ကောင်းကျိုးတွေများစွာရှိတယ်ဆိုတာ သိကြပေမယ့် တကယ်တော့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဒီ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ ကောင်းကျိုးများစွာရှိနေပါသေးတယ်။ အစာအိမ်ထဲမှာ ဗလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ သံလွင်ဆီတစ်ဇွန်းစားလိုက်ဖို့က အရသာကို တော်တော်သည်းခံရမှာဖြစ်ပေမယ့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် တော်တော်လည်း အံ့ဩဖွယ်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ၎င်းကို သင်စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ တကယ်ကို ထိုက်တန်ပါတယ်။
၁။ သင့်ရဲ့ အသားအရေတွေကို ပြောင်းလဲလာစေတယ်
သံလွင်ဆီဟာ အလှကုန်ပစ္စည်းမြောက်များစွာအတွက် မရှိမဖြစ်ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ၎င်းက သင့်အစားအစာတွေရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် သင့်အသားအရေကို အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းက ရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေပြီး မျက်နှာအရေးအကြောင်းတွေကို လျော့ပါးစေပါလိမ့်မယ်။ သံလွင်ဆီမှာ အစွမ်းတက်တဲ့ antibacterial ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိပြီး သဘာဝပိုးသတ်ဆေးအဖြစ် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသေးတယ်။
၂။ ဝိတ်ကျဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်
လေ့လာမှုတွေအရ မြေထဲပင်လယ်စာ စားသုံးခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အပေါ်မှာ အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သံလွင်ဆီဟာ မြေထဲပင်လယ်စာကြွယ်ဝတဲ့ အစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ၃ နှစ်တာလေ့လာမှုတစ်ခုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လူပေါင်း ၁၈၀ ကျော်က သံလွင်ဆီစားသုံးခြင်းက ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
၃။ သင့်ဉီးနှောက် ဉာဏ်ရည်ကို တိုးတက်စေတယ်
သံလွင်ဆီမှန်မှန်စားခြင်းက သင့်ရဲ့ ဉီးနှောက်ဆဲလ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ plaque (ပိုးမွှား၊ အဖတ်) လေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ဒီပိုးမွှားလေးတွေဟာ အယ်ဇိုင်းမားရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဖြစ်အများဆုံးစိတ်ရောဂါကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်သံလွင်ဆီကို စားသုံးသူတွေဟာ အဆီနည်းသော အစားအစာတွေကို ထိန်းသိမ်းထားသူတွေထက် ပိုမိုမှတ်ညဏ်ကောင်းစေပါတယ်။
၄။ ၎င်းက အရိုးကျန်းမာရေးကို ထောက်ပံ့ပေးတယ်
သံလွင်ဆီမှာပါဝင်တဲ့ ဒြပ်စင်က အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းတွေ ခံစားနေရတဲ့ လူတွေကို ကောင်းကောင်းအကျိုးပြုပါတယ်။ Omega –3အဆီအက်ဆစ်အရင်းအမြစ်ကြွယ်ဝပြီး ငါးအဆီနဲ့အတူ ပေါင်းစပ်ထားတာကြောင့် ပိုပြီး ကောင်းကောင်းအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ သင့်ရဲ့ အူကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းပါတယ်
သင့်ရဲ့ အစာအိမ်ထဲမှာ ရှင်သန်နေတဲ့ ဘတ်တီးရီးယားတွေဟာ အစာအိမ်အနာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သံလွင်ဆီဟာ antibiotics ကို ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ ဘတ်တီးရီးယားတွေကိုတောင်မှ တိုက်ဖျက်နိုင်တယ်လို့ သက်သေပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ တစ်နေ့လျှင် Virgin သံလွင်ဆီကို ၃၀ ဂရမ်ထက် ပိုသောက်ပေးမယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး ၁၄ ရက်အတွင်း အန္တရာယ်ရှိသော ဘက်တီးရီးယားတွေကို သေစေနိုင်ပါတယ်။
၆။ သင့်ရဲ့ သွေးသကြားဓာတ်ကို ထိန်းချုပ်ပေးတယ်
Virgin သံလွင်ဆီဟာ သွေးသကြားဓာတ်ဂလူးကိုစ့်ကို လျှော့ချဖို့ လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းက သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား (၂) မျိုးကနေ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ အစားအသောက်တွေထဲမှာ သံလွင်ဆီဟာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီလား ? ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေကြုံတွေ့ရလဲ